Ihoyilese yePig House FRP uMvelisi oMkhulu weFan ephumayo kunye noMboneleli |QZ
Ihagu House FRP Big Exhaust Fan
Ukuzala kweemazi kukuvumela ukuba iimazi emva kokukhwelana zikwazi ukuhamba ngokukhululekileyo, ukunciphisa isifo seemazi, ukunciphisa izinga lokuzala, ukunciphisa izinga le-dystocia, ukwandisa ubomi benkonzo yeemazi.
Hlwaya imowudi yoluhlu lwasimahla
Imowudi ekrelekrele yokukhulisa umhlambi wemazi ilawulwa ikakhulu yisoftware yekhompyuter, kunye nesikhululo sokutyisa esinye okanye ngaphezulu njengeetheminali zolawulo.Iskena siqokelela ulwazi lwemazi yeemazi ngokweethegi ze-elektroni ezinxitywa ezindlebeni zeemazi, sibale unikezelo lwemihla ngemihla lweemazi ngokwefomula yenzululwazi, kwaye silawula isixhobo somatshini kunye nesixhobo sombane sokutyisa ngokuchanekileyo.Umlawuli uhambisa izazisi zemazi, ukutya okudliwayo, ixesha lokutyisa kunye nolunye ulwazi kwikhompyuter ngokusebenzisa imowudi engenazingcingo, kwaye isoftware yekhompyuter yenza izibalo kunye nohlalutyo lwedatha, ukuze abaphathi beefama zeehagu bakwazi ukujonga ngokulula ulwazi lwehagu nganye. ukuze kuphunyezwe ukutyisa okuchanekileyo kunye nolawulo lwedatha yeemazi.
1. Ibha yokunciphisa + isikhululo sokutya sombane
Iimpawu: Iigilts okanye iimazi ezikhulelweyo zondliwa kwiindawo ezithintelweyo kwiiveki ezi-5 zokuqala emva kokukhwelana, kwaye iimazi ezikhulelweyo zondliwa ngokuchanekileyo kwizikhululo zokutya ze-elektroniki ukusuka kwiiveki ezi-6 ukuya kwiintsuku ze-5 ngaphambi kokulala.I-ESF enye inokulawula i-60-80 ihlwayela.
Izinto eziluncedo: i-embryo ezinzileyo kwinqanaba lokuqala lokukhwelana, ukunciphisa ukuphunza kwemazi;Qinisekisa ixesha lokutyisa imazi ukuze ufumane ukutya okuchanekileyo.
2. Ukutya kuyo yonke inkqubo kwisikhululo sokutyisa sombane
Iimpawu: Iimazi zityiswa kwiindawo zokuxheshisela ngombane ngexesha lokumitha kwazo, zilungele iifama ezinkulu zeehagu.
Izinto eziluncedo: Lo mzekelo ufanelekile, ongenakufezekisa kuphela ukutya okuchanekileyo ekuzaleni kwamahhala, kodwa ugweme ukuhamba ukusuka kwiqela ukuya kwelinye.Ubudlelwane boluntu lwemazi bukhulile, kwaye uxinzelelo lweqela ukuya kwiqela luyancitshiswa.
3. Isangqa esincinci isikhululo sokutya sombane + ibha yomda
Iimpawu: Iimazi ezinexesha elifanayo lokukhwelana, ubunzima obufanayo kunye nobukhulu kunye nomahluko omncinci wobushushu ziphakanyiswe kwipeni enye, kunye ne-5-20 yeemazi kwipeni nganye, kwaye ihanjiswe kwikholamu elinganiselweyo yokutyisa ekukhulelweni kade.Akukho xinzelelo lokutyisa.
Izibonelelo: Ukuhamba ngokukhululekileyo kweemazi kuqinisekisiwe, izinga lokuzala liyancipha, izinga le-dystocia liphantsi, kwaye ubomi benkonzo buyanda.Nangona kunjalo, le ndlela yokutyisa izakukhokelela ekutyisweni ngokungalingani kwinqanaba lokuqala lehagu.
Ngaphambili: I-fiberglass entsha ye-FRP Exhaust Fan
Okulandelayo: I-automated animal feeder yeplastiki yenkukhu feeder pan kwifama yeenkukhu
indlu yehagu exhaust fan
Umlandeli weNdlu yeehagu
Iinkukhu Automatic Feeding System Supplier
iisilo zokutya kwenkukhu ziyathengiswa
Imigqomo yokugcina ukutya kwemfuyo
IiFama zeSilos, Umkhombe wehagu, Iinkukhu Farm Fan, Yondla iiSilos, IiNkqubo zokuPholisa zeFan kunye nePad eziPhumayo, Iinkukhu Housing System,